Altcoins 2022. तिनीहरू के हुन् र यो वर्षको उत्कृष्ट के हुन्?
Cardaniers अलर्ट प्रो
Cardaniers Alert Pro कोसिस गर्नुहोस्
बिनान्सले भर्खरै क्रिस्टियानो रोनाल्डोलाई...
फेसबुकले मेटाभर्सको लागि डिजिटल वालेट सुरू गर्‍यो:…
Ripple (XRP) ले अनुबंध गर्न नयाँ हब सिर्जना गर्नेछ ...
Cardano फाउन्डेशन (ADA) सामेल भएको छ ...
क्यानाडाको खनन विशाल बिटफार्म्सले 3.000 BTC बेच्छ ...
स्पेनको अर्थ मन्त्रालयले एक…
सेल्सियस (CEL) पछिल्लो समयमा ११५% बढ्यो...
Cardano (ADA) विकास टोलीले ढिलाइ गरेको छ ...
Bitcoin बन्यो सबैभन्दा धेरै खोजिने शब्द...
स्टेबलकोइन टेथर (USDT) ले यसको पूँजीकरण घटेको देख्छ...
२०२२ मा इथरियम कसरी खानी गर्ने: व्यावहारिक गाइड
२०२२ मा खनन क्रिप्टोकरन्सीहरू: सबै कुञ्जीहरू
कसरी Litecoin 2022 माइन गर्ने: व्यावहारिक गाइड
2022 मा Bitcoin खनन - अन्तिम गाइड
मेरा क्रिप्टोकरन्सीहरू पछ्याउन5चरणहरू ...
व्यापारीहरूको लागि आधारभूत गाइड: तपाइँसँग कति प्रतिशत हुनुपर्छ ...
Cardaniers ALERT PRO - Binance बाट कसरी व्यापार गर्ने
२०२१ मा Airdrops मार्फत नि:शुल्क क्रिप्टोकरन्सीहरू प्राप्त गर्नुहोस्
CoinTracking - स्पेनमा Cryptocurrencies घोषणा गर्न सिक्नुहोस्
कसरी ड्यास माइन गर्ने: शुरुआती गाइड
युरोपले मोडल ७२० को अन्त्य गर्छ: के नतिजा...
Altcoins, तिनीहरू के हुन् र कुनमा छन् ...
सेन्ट स्टप लस, संरक्षक जसले तपाइँको...
के तपाईलाई थाहा छ "टेपरिङ" भनेको के हो? तपाईको के…
Cryptocurrencies मा Scalping यो के हो? लायक?
इथरियम ग्याँस - तपाईलाई के जान्न आवश्यक छ ...
ठोसता: सम्झौताको प्रोग्रामिङ भाषा...
शीर्ष 10 Cryptocurrency पुस्तकहरू
भालु, साँढे र ह्वेल तिनीहरू के हुन् ...
क्रिप्टोकरेन्सी आर्बिट्रेज भनेको के हो? के यो लायक छ ...
Altcoins, तिनीहरू के हुन् र जसमा तिनीहरू 2022 मा लगानी गर्न उत्तम छन्
द्वारा अल्भारो ब्लान्को 21 / 01 / 2022
21 / 01 / 20224टिप्पणिहरु
के तपाइँ बिटकोइनमा केहि वैकल्पिक क्रिप्टोकरेन्सीहरूमा लगानी गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ? यदि तपाइँसँग क्रिप्टोकरेन्सीहरूसँग कम्तिमा केही अनुभव छ भने, तपाइँलाई थाहा छ कि व्यापार कठिन हुन सक्छ, त्यसैले तपाइँले सबै कुरा सही गर्न र ठूलो जित्नको लागि धेरै जान्नु आवश्यक छ।
Cardaniers समुदायमा सामेल हुनुहोस्, हामी तपाईंलाई Cryptocurrencies मा तपाईंको लगानीमा राम्रो परिणाम प्राप्त गर्न मद्दत गर्न जाँदैछौं:
तपाईंले आफ्नो इमेल प्रशिक्षणमा प्राप्त गर्नुहुनेछ ताकि तपाईंले क्रिप्टोकरन्सीहरूमा काम गर्न सिक्नुहुनेछ र आफ्नो कमाई बढाउनुहोस्.
हामी तपाइँसँग क्रिप्टो संसारमा सबैभन्दा सान्दर्भिक समाचार साझा गर्नेछौं ताकि तपाइँ सक्नुहुन्छ विवेकपूर्ण लगानी निर्णय गर्नुहोस्.
हामी तपाइँसँग हाम्रो आफ्नै लगानीहरू साझा गर्न जाँदैछौं ताकि तपाइँ तिनीहरूलाई नक्कल गर्न सक्नुहुन्छ र हामी जस्तै समान परिणाम प्राप्त गर्नुहोस्।
यो पूर्ण रूपमा हो GRATIS.
>>>सामेल हुन यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।<<
त्यहाँ अझै छ altcoins तपाईले नाम दिन सक्नुहुने भन्दा, ती सबै एक वा अर्को समस्यालाई सम्बोधन गर्न सिर्जना गरिएको थियो। केहि altcoins, जस्तै Bitcoin नगद र Litecoin, Bitcoin को क्लोन हो, जबकि अरूले गोपनीयता, एकीकरण, र अनुकूलता जस्ता मुद्दाहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्दछ।
Altcoins हो पहिलो महान क्रिप्टोकरेन्सीको विकल्प, बिटकोइन। छोटकरीमा, तिनीहरू क्रिप्टोकरेन्सीहरू हुन् जसले ब्लकचेन भनिने टेक्नोलोजी प्रयोग गर्दछ जसले सुरक्षित पियर-टु-पियर लेनदेनहरूलाई अनुमति दिन्छ, र जसको तार्किक रूपमा बिटकोइनमा केही फाइदाहरू छन्, विभिन्न प्रयोगकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्न र थप सुरक्षा उपायहरू प्रदान गर्न।
2022 मा विचार गर्न को लागी सबै भन्दा राम्रो altcoins को हो भनी बताउन अघि, altcoins को अवधारणा को बारे मा जानौं, म यो पनि सिफारिस गर्दछु कि तपाइँ हाम्रो लेख मा एक नजर राख्नुहोस्। सबै भन्दा राम्रो cryptocurrencies.
यहाँ के पाउनुहुनेछ?
1 Altcoins के हुन्?
2 Altcoins कहाँ किन्न
3 २०२२ मा शीर्ष ५ altcoins
3.2 Vetchain - VET
3.4 लहर - XRP
3.5 Litecoin - LTC
4 Altcoins संग सुरक्षित लेनदेन कसरी गर्ने
4.1 altcoin मा लगानी गर्नु अघि आफ्नो अनुसन्धान गर्नुहोस्
4.2 Bitcoin कसरी चल्छ सधैं हेर्नुहोस्
4.3 तपाईंले ठूलो अवसर गुमाउनुहुनेछ भनेर सोचेर नडराउनुहोस्
4.4 विश्राम लिनुहोस्
4.5 गम्भीर विकास योजनाको साथ Altcoins छान्नुहोस्
4.6 दैनिक व्यापार नगर्नुहोस्
Altcoins के हुन्?
Altcoins अंग्रेजीमा "वैकल्पिक सिक्का" को संक्षिप्त रूप हो।। तिनीहरू Bitcoin को "विकल्प" हुन्, जुन अस्तित्वमा रहेको पहिलो मुद्रा थियो।
सामान्यतया भन्नुपर्दा, altcoins Bitcoin जस्तै धेरै समान तरिकामा काम गर्दछ। निजी कुञ्जी प्रयोग गरेर, तपाईंले आफ्नो डिजिटल वालेटबाट अर्को प्रयोगकर्ताको वालेटमा भुक्तानी पठाउन सक्नुहुन्छ।
altcoin मा एक blockchain छ, जहाँ लेनदेन स्थायी र सार्वजनिक रूपमा रेकर्ड गरिएको छ, त्यसैले ट्रेडहरू परिवर्तन वा तथ्य पछि अस्वीकार गर्न सकिँदैन। ब्लकचेन गणितीय प्रमाणहरू द्वारा सुरक्षित गरिएको छ जसले ब्लकहरूमा लेनदेन पुष्टि गर्दछ।
तर सबै altcoins Bitcoin जस्तै समान नियमहरू पालना गर्दैनन्। उदाहरणका लागि, बिटकोइनले प्रत्येक १० मिनेटमा बिटकोइनहरू मात्र खानी वा उत्पादन गर्ने हुँदा, कार्डानोको एडीए जस्ता केही क्रिप्टोकरेन्सीहरूले प्रशोधन गर्नेछन्। छिटो र कम ऊर्जा प्रयोग संग भुक्तानी.
वैसे, तपाईंले सुन्नु भएको छ मनको पूँजी?, पक्कै पनि तपाइँ हाम्रो लेखमा रुचि राख्नुहुन्छ।
Altcoins कहाँ किन्न
व्यापार आयोग: ०.१%
तपाईंलाई अन्य एक्सचेन्ज/क्रिप्टो वालेटहरूबाट पैसा हस्तान्तरण गर्न अनुमति दिन्छ
तपाईं अन्य व्यापारीहरूबाट लगानी प्रतिलिपि गर्न सक्नुहुन्छ
Cryptocurrencies को संख्या: 194 cryptocurrencies
सुरक्षा स्तर: धेरै सुरक्षित
शुरुवातकर्ताहरूको लागि कठिनाई: कम
प्रतिलिपि व्यापारी: हो
पहिलो खरिदको साथ $153 नि:शुल्क
डेबिट/क्रेडिट कार्ड, रिभोलट
Cryptocurrencies को संख्या: 393 cryptocurrencies
प्रतिलिपि व्यापारी: होइन
Cardano उपलब्ध छ?: हो
सञ्चालनका लागि आयोग: B2M र ०.९५% बाँकी क्रिप्टोकरन्सीहरूसँग नि:शुल्क
Cryptocurrencies को संख्या: 69 cryptocurrencies
सुरक्षा स्तर: सबैभन्दा सुरक्षित
शुरुवातकर्ताहरूको लागि कठिनाई: धेरै कम
पहिलो खरिदको साथमा €5 नि:शुल्क
बाइनान्स, संसारको सबैभन्दा ठूलो विनिमय र सबैभन्दा सुरक्षित मध्ये एक हुनुको अलावा, यो सबैभन्दा धेरै Altcoins भएको एक हो, आज कुल 341, त्यसैले यदि तपाईं चाहनुहुन्छ भने altcoins किन्नुहोस्, म Binance सिफारिस गर्छु, यो सम्पूर्ण Cardaniers टोली द्वारा प्रयोग गरिएको हो।
>> तपाइँ यस लिङ्कबाट Binance को लागी साइन अप गर्न सक्नुहुन्छ <
अब हामीलाई थाहा छ कि altcoins के हो र तिनीहरूलाई कहाँ किन्न सकिन्छ, हेरौं कुन कुनले 2022 मा फरक हुने वाचा गर्छ।
२०२२ मा शीर्ष ५ altcoins
कार्डानो उनी २०२२ मा सबैको रडारमा छिन्, २०२० मा उनी लगभग पूर्ण अज्ञात थिइन्। यो क्रिप्टोकरेन्सीले अधिक कार्यक्षमता उत्पादन गरेर र प्रयोग गर्न सजिलो बनाएर स्मार्ट अनुबंध उद्योगमा खेल परिवर्तन गर्दैछ। यो एक बलियो टोली र एक भावुक समुदाय छ।
कार्डानो एक इन्क्युबेशन प्लेटफर्म हो, Ethereum जस्तै, जसले स्मार्ट सम्झौताहरूसँग काम गर्छ र सुरक्षामा केन्द्रित हुन्छ। Cardano वास्तुकला मा फोकस संग, धेरै तहहरु मिलेर बनेको छ सुरक्षा र एक वैज्ञानिक दर्शन मा निर्मित छ, वैज्ञानिकहरूको उत्कृष्ट समूहको समर्थनमा। Cardano प्लेटफर्म EOS र ETH प्लेटफर्म जस्तै धेरै मिल्दोजुल्दो छ।
साथै, पूर्ण स्विंगमा, यसले सहकर्मी समीक्षा अनुसन्धान समुदाय निर्माण गरिरहेको छ जहाँ वैज्ञानिकहरूले साथीहरूको समीक्षाको लागि आफ्नो शैक्षिक कागजातहरू पेश गर्न सक्छन्। Cardano नेटवर्क गर्व छ ADA cryptocurrency को घर.
कार्डानो विज्ञान टोलीले समुदायमा एकीकृत गर्न खोजिरहेका विचारहरू हुन्:
विभिन्न तहहरूमा लेखा र गणनाको विभाजन।
उच्च मोड्युलर कार्यात्मक कोडमा कोर कम्पोनेन्टहरूको कार्यान्वयन।
विद्वानहरू र विकासकर्ताहरूको साना समूहहरू सहकर्मी-समीक्षा अनुसन्धानसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै।
को गहन प्रयोग अन्तःविषय टोलीहरूInfoSec विशेषज्ञहरूको प्रारम्भिक प्रयोग सहित।
श्वेतपत्र, कार्यान्वयन, र थप अनुसन्धान बीचको द्रुत पुनरावृत्ति समीक्षाको क्रममा पत्ता लागेका समस्याहरूलाई सच्याउन आवश्यक छ।
नेटवर्कलाई नष्ट नगरी पोस्ट-डिप्लोइमेन्ट प्रणालीहरू अपग्रेड गर्ने क्षमता विकास गर्नुहोस्।
ए को विकास विकेन्द्रीकृत वित्तिय संयन्त्र भविष्यको कामको लागि।
क्रिप्टोकरन्सीहरूको डिजाइन सुधार गर्नको लागि दीर्घकालीन दृष्टि, तिनीहरूलाई उचित र सुरक्षित प्रयोगकर्ता अनुभवको साथ मोबाइल उपकरणहरूमा काम गर्न अनुमति दिँदै।
एउटै खातामा धेरै सम्पत्तिहरूको लागि खाताको आवश्यकता पहिचान गर्नुहोस्।
को उद्देश्यका लागि वैकल्पिक मेटाडेटा समावेश गर्न लेनदेन सारांश विरासत प्रणाली को आवश्यकताहरु लाई राम्रो संग फिट.
अर्थपूर्ण सुविधाहरू अपनाएर लगभग 1.000 altcoins बाट सिक्नुहोस्।
Cardano एक blockchain पूर्वाधार निर्माण गर्दैछ जसले अनुमति दिन्छ कम बिजुली खपत गरेर धेरै छिटो, सुरक्षित र अधिक दिगो तरिकामा लेनदेनहरू सञ्चालन गर्नुहोस्.
यसबाहेक, यो altcoin सँग क्वान्टम कम्प्युटर समस्याको समाधान छ जुन अन्य धेरै ब्लकचेनहरूले भविष्यमा सामना गर्नेछन्। अझै लागू नभए पनि कम्पनीहरूले यस क्षमतामा उल्लेखनीय चासो देखाएका छन्।
यसको मतलब कार्डानो भविष्यको विकासको लागि राम्रोसँग स्थित छ र अर्को एक वा दुई वर्षमा उल्लेखनीय प्रगति देखाउन सक्छ।
>> यो लिङ्कबाट Binance मा Cardano किन्नुहोस् <
Vetchain - VET
[ccpw आईडी = 3319 XNUMX२XNUMX२१]
यो प्लेटफर्म एक उद्यम-केन्द्रित ब्लकचेन हो जसले उद्योगका विभिन्न पक्षहरूमा व्यापार समाधान र अनुप्रयोगहरू प्रदान गर्दछ, सहित। सूची, ट्र्याकिंग र गुणस्तर नियन्त्रण।
VetChain का सेवाहरू उपयुक्त समयमा आउँछन् जब व्यवसायिक संसारमा ब्लकचेन अपनाउने क्रम बढिरहेको छ, प्रविधिले उपलब्ध गराउन सक्ने समाधानहरूको परिणाम स्वरूप।
प्लेटफार्म यसमा दुई टोकनहरू छन् जुन यसको सञ्चालनका विभिन्न पक्षहरूको लागि प्रयोग गरिन्छ। VET नेटवर्कमा मूल्य स्थानान्तरण गर्न प्रयोग गरिने टोकन हो। तसर्थ, यो विभिन्न एक्सचेन्जहरूमा व्यापार गरिन्छ र प्लेटफर्ममा पावर लेनदेन गर्न प्रयोग गरिने VHTO टोकन भन्दा राम्रोसँग परिचित छ।
ब्लकचेन टेक्नोलोजीको व्यवसाय अपनाउने वृद्धिसँगै, हामीले २०२२ मा VET को मूल्यमा वृद्धि देख्न सक्छौं।
प्लेटफर्म, तथापि, यसको सुरक्षा सुधार गर्न आवश्यक छ। सम्भावित लगानीकर्ताहरू मात्र लगानीकर्ता बन्नेछन् यदि तिनीहरूले प्लेटफर्म भित्र आफ्नो लगानीको सुरक्षाको ग्यारेन्टी दिएका छन्।
2019 को उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने altcoin को रूपमा नामित, ChainLink यहाँ रहन को लागी छ।
चेनलिङ्कले ब्लकचेन इकोसिस्टममा एउटा रोचक सेवा प्रदान गर्दछ बाह्य डेटा संग स्मार्ट अनुबंध लिङ्क, अफ-चेन र वास्तविक संसारमा। यसले यसलाई प्रत्येक प्लेटफर्मको लागि आवश्यक उपकरण बनाउँछ जसलाई बाह्य डेटा चाहिन्छ, जुन सम्भवतः कुनै पनि ब्लकचेन प्लेटफर्म हो।
प्लेटफर्मले सम्भवतः २०२२ मा यसको महत्त्वलाई जोड दिनेछ, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ Chainlink भविष्य पूर्वानुमान यहाँ.
Ripple एउटा कम्पनी हो जसले बैंकहरू, भुक्तानी प्रदायकहरू, डिजिटल सम्पत्ति एक्सचेन्जहरू, र व्यवसायहरूलाई विश्वव्यापी रूपमा पैसा पठाउन, सामान्यतया कम्पनीको क्रिप्टोकरेन्सी, XRP प्रयोग गरेर सक्षम पार्न ब्लकचेन प्रविधिको लाभ उठाउँछ।
धेरै तरिकामा, Ripple क्रस-बोर्डर क्रिप्टोकरेन्सी भुक्तानीहरू पछाडिको पूर्वाधार हो.
क्रिप्टोकरेन्सीहरूले थप कर्षण प्राप्त गर्दा, Ripple ले आफ्नो नेटवर्कमा थप र धेरै बैंकहरू र अन्य ग्राहकहरू थप्दैछ।
क्रिप्टोकरेन्सी जागरूकता र माग बढ्दै जाँदा धेरै भन्दा धेरै बैंकहरूले Ripple सँग 2022 मा साझेदारी गर्नेछन्, र यसले गर्दा, XRP को मूल्य पनि बढ्नेछ। लहर भविष्य यो लिङ्क जाँच गर्नुहोस्.
2011 मा, कम्प्युटर प्रोग्रामर चार्ली लीले बिटकोइन सुधार गर्ने तरिकाहरू देखे। तर बिटकोइनमा परिवर्तनहरू प्रस्ताव गर्नुको सट्टा, लीले बिटकोइनलाई फोर्क गर्यो, नयाँ ब्लकचेन सिर्जना गर्न परिवर्तनहरू सहित यसको कोड प्रतिलिपि गर्दै, र परिणामस्वरूप, Litecoin भनिने एक आशाजनक नयाँ altcoin सिर्जना गरियो।
सतहमा, Litecoin यसको पूर्ववर्तीसँग धेरै समान देखिन्छ: एक वैश्विक मुद्रा विकल्प बन्न खोज्छ र एक प्रमाण-कार्य सहमति एल्गोरिथ्म प्रयोग गर्दछ (PoW) तपाईंको ब्लकचेन सुरक्षित गर्न।
Litecoin एन्क्रिप्शन एल्गोरिथ्म कम स्रोतहरू खपत गर्दछ र Bitcoin भन्दा बढी लोकतान्त्रिक छ, धेरै छिटो लेनदेन समय को लागी अनुमति दिँदा। यी कारणहरूका लागि, Litecoin Bitcoin भन्दा लेनदेन गर्न सस्तो र छिटो तरिका हो, यसलाई दैनिक खरिदहरूको लागि थप उपयोगी बनाउँछ।
लगानी गर्न अर्को धेरै रोचक Altcoin हो Dogecoin.
Altcoins संग सुरक्षित लेनदेन कसरी गर्ने
altcoin मा लगानी गर्नु अघि आफ्नो अनुसन्धान गर्नुहोस्
च्याट रुमहरू, सोशल मिडिया समूहहरू, र Reddit वा Facebook जस्ता छलफल फोरमहरूमा धेरै प्रयोगकर्ताहरूको एक गलत उद्देश्य छ, त्यसैले तिनीहरूको सल्लाहले तपाइँको खेललाई चोट पुर्याउन सक्छ। एक पेशेवर व्यापारी बन्न र दीर्घकालीन सफलताको लागि आफैलाई स्थितिमा राख्न, तपाईंले वक्र भन्दा अगाडि रहनु पर्छ।
याद गर्नुहोस्, क्रिप्टोकरेन्सी लगानीकर्ताको रूपमा तपाईंको काम हो आफ्नो अनुसन्धान सञ्चालन गर्नुहोस्, चार्टहरू हेर्नुहोस् र सही भविष्यवाणी गर्नुहोस्। यद्यपि, यदि तपाईलाई केहि सल्लाह चाहिन्छ जस्तो लाग्छ भने, भरपर्दो ब्लगहरूमा सदस्यता लिने विचार गर्नुहोस्।
Bitcoin कसरी चल्छ सधैं हेर्नुहोस्
तर यो लेख altcoins को बारे मा थिएन?
हो, यो हो, तर बजारमा परिवर्तनलाई ड्राइभ गर्ने मुख्य सम्पत्ति अझै पनि छ Bitcoin। यो सुनको मानक हो, एक ब्रान्ड यति बलियो छ कि यसले सबैलाई प्रभाव पार्छ.
त्यसोभए यदि तपाईंले altcoin बजारमा केही महत्त्वपूर्ण परिवर्तनहरू भइरहेको देख्नुभयो भने, पहिले बिटकोइन बजारमा हेर्नुहोस्। धेरै जसो altcoins ले तिनीहरूको मूल्य अनुसार व्यापार गर्दछ, त्यसैले अन्तर्निहित सम्पत्तिलाई बेवास्ता गर्नु जुन यो सबै सँगै राख्छ केवल गलत हो।
साथै, तपाईले थाहा पाउनु पर्छ कि बिटकोइन र altcoins एक उल्टो सम्बन्ध छ। यसको मतलब यो हो यदि altcoins को मूल्य घट्छ भने, bitcoins ले मूल्य प्राप्त गर्दछ। यसको विपरित, यदि बिटकोइन्सले मूल्य गुमाउँछ भने, altcoins लाभ हुन्छ। त्यसोभए यदि बिटकोइन बजार विशेष गरी अस्थिर छ भने, तपाईंले चाँडै altcoin व्यापारिक अवस्थाहरूमा पनि परिवर्तन देख्नुपर्छ।
तपाईंले ठूलो अवसर गुमाउनुहुनेछ भनेर सोचेर नडराउनुहोस्
यो शुरुआती क्रिप्टोकरन्सी व्यापारीहरू बीच एक सामान्य गल्ती हो जुन तपाईंले निश्चित रूपमा बेवास्ता गर्नुपर्छ। मानिसहरु जो यो उद्योग मा नयाँ छन् तिनीहरू प्रायः तिनीहरूको डरलाई तिनीहरूका कार्यहरू चलाउन प्रयोग गर्छन्, र तिनीहरूमध्ये धेरैले ठूलो गुमाउँछन्.
उदाहरणका लागि, के तपाइँ तपाइँको कम्प्यूटरमा व्यापार गर्दै हुनुहुन्छ र चीजहरू राम्ररी गइरहेको छ, तर अचानक एउटा विन्डो पप अप भयो कि ट्रेड लगभग सकिएको छ र तपाइँ अझै भित्र हुनुहुन्न? तपाइँ यसलाई बेवास्ता गर्न प्रबन्ध गर्न सक्नुहुन्छ, तर प्रलोभन बढ्छ जब अर्को विन्डोले तपाइँलाई सम्झौता बन्द गर्न प्रलोभन गर्ने प्रयास गरिरहेको देखिन्छ।
हतार गर्नुको सट्टा, बस पर्खनुहोस्। यो मामिलामा तपाईले गर्न सक्नुहुने सबै भन्दा राम्रो निर्णय हो किनभने यदि तपाईसँग खेल योजना छ, र तपाईले गर्नुपर्छ, सम्भावनाहरू उच्च छन्, र यसमा तपाईलाई आमन्त्रित गरिएको प्रत्येक व्यापारलाई स्वीकार गर्ने समावेश गर्नु हुँदैन। त्यसो गर्नाले ठूलो गुमाउने सम्भावना धेरै बढ्छ।
altcoin बजार द्रुत रूपमा परिवर्तन हुने वातावरण हो र धेरै ध्यान चाहिन्छ, तर यसको मतलब यो होइन कि तपाईंले आफ्नो लगानीलाई सधैं जाँच गर्नुपर्छ।
निस्सन्देह, तपाइँको क्रिप्टोकरेन्सीहरू जाँच्नु र तिनीहरूको मूल्य बढेको देख्नु अचम्मको छ, तर तपाइँले यो पनि याद गर्नुपर्दछ कि तपाइँ एक जुनून विकास गर्ने ठूलो जोखिममा हुनुहुन्छ जसले तपाइँको जीवनमा केहि गम्भीर नकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्छ।
altcoin मूल्यको अनियमित लाभको थ्रिलले तपाईंलाई आकर्षित गर्छ एक घण्टामा दस पटक बजार जाँच गर्नु र केहि आवेगपूर्ण लगानी गर्नु धेरै नराम्रो विचार हो.
अर्कोतर्फ, ताजा दिमाग र उचित विश्रामले सही निर्णय गर्ने सम्भावना बढाउँछ।
गम्भीर विकास योजनाको साथ Altcoins छान्नुहोस्
के तपाईलाई याद छ हाम्रो सूचीमा पहिलो altcoin के हो? Cardano, र छनौट निर्दोष छैन।
Cardano वैज्ञानिक अनुसन्धान र आधारित एक altcoin हो चरणहरूमा विकास योजनाको साथ। यो अप्रत्याशित रूपमा सुरु भएको थिएन, र यसले क्रिप्टोकरेन्सी बजारमा क्रान्तिकारी परिवर्तन गर्न चाहन्छ।
दैनिक व्यापार नगर्नुहोस्
यदि तपाईंलाई क्रिप्टोकरेन्सी बजारको आफ्नो ज्ञान सुधार गर्न आवश्यक छ जस्तो लाग्छ भने, दिनको व्यापार खराब विचार हुन सक्छ। अनुभवी व्यापारीहरूलाई पनि थाहा छ कि प्रभावकारी दिन व्यापारले धेरै समय र प्रयास लिन्छ, त्यसैले गल्ती गर्ने मौका बढाउँछ.
उदाहरणका लागि, मानौं कि तपाईं आफ्नो रोजाइको altcoin को डे-ट्रेडिङ गर्दै हुनुहुन्छ र तपाईंले यसलाई खरिद गर्नुभएको मूल्यको १० प्रतिशत पुग्दा आफ्नो स्थिति बन्द गर्ने नियमको पालना गर्दै हुनुहुन्छ।
यो थम्बको राम्रो नियम जस्तो लाग्न सक्छ, तर त्यहाँ एक राम्रो मौका छ कि मूल्य 10 प्रतिशत भन्दा बढि बढ्न जारी रहनेछ। नतिजा स्वरूप, तपाईंले चाँडै बन्द गरेर थप कमाउने अवसर गुमाउनु हुनेछ।
दिनको समयमा व्यापार गर्नुको सट्टा, तपाईको क्रिप्टोकरेन्सी किन्न र थोरै समयको लागि होल्ड गर्ने विचार गर्नुहोस्.
यहाँ 2022 मा लगानी गर्न को लागी हाम्रो सबै भन्दा राम्रो altcoins छन्। यद्यपि, यो सधैं सम्झना महत्त्वपूर्ण छ कि क्रिप्टोकरेन्सी एक अस्थिर बजार हो। हामीले गर्न सक्ने सबै उत्कृष्ट लाभहरूको बारेमा सोच्नु राम्रो भए तापनि, तपाइँको लगानी पनि तल जान सक्ने सम्भावना छ।
कुनै पनि प्रकारको लगानीको रूपमा, तपाईं गुमाउन इच्छुक हुनुहुन्छ भन्दा बढी लगानी नगर्नुहोस्.
यी मध्ये कुन altcoins मा तपाइँ शर्त लगाउनुहुनेछ?
Cardaniers एक वित्तीय जानकारी च्यानल हो, एक लगानी सल्लाहकार होइन। हामी व्यक्तिगत वा व्यक्तिगत लगानी सल्लाह प्रदान गर्दैनौं। क्रिप्टोकरेन्सीहरू अस्थिर लगानीहरू हुन् र स्थायी र कुल घाटाको जोखिम सहित महत्त्वपूर्ण जोखिम बोक्छन्। विगतको कार्यसम्पादन भविष्यको नतिजाको सूचक होइन। सिद्ध रणनीतिहरू सिफारिसहरू होइनन्। वित्तीय निर्णयहरू गर्नु अघि आफ्नो वित्तीय सल्लाहकारसँग परामर्श गर्नुहोस्।
14 को भविष्य संग 2022 सस्तो क्रिप्टोकरेन्सी
सान स्टप हानि, संरक्षक जसले तपाइँको बचत गर्नेछ ...
के तपाईलाई थाहा छ "टेपरिङ" भनेको के हो? के छन तिम्रो...
इथरियम ग्यास - तपाईलाई के जान्न आवश्यक छ ...
भालु, साँढे र ह्वेल तिनीहरू मा के छन् ...
NFTs के हो र तिनीहरू किन...
samir 17/01/2021 - 22:45
उत्कृष्ट जानकारी...म क्रिप्टोकरेन्सीहरूको संसारमा यी नेताहरूका लागि नयाँ छु र म हरेक दिन थप सिक्दैछु जसको लागि अध्ययन र अनुसन्धान गर्नु बाहेक अरू कुनै उपाय छैन...
म पोल्काडोट नेटवर्कको एल्कोइन बारे जान्न चाहन्छु, दीर्घकालीन लगानीको रूपमा।
अल्भारो ब्लान्को 18/03/2021 - 01:56
यहाँ एक दीर्घकालीन भविष्यवाणी छ: https://cardaniers.com/prediccion-polkadot-futuro/
Angelica 09/02/2021 - 03:43
के तपाइँसँग Dogecoin को बारेमा कुनै राय वा लेख छ?
डेनियल इसाक पोजादस 13/02/2021 - 15:43
उत्कृष्ट जानकारी, धेरै स्पष्ट। म क्रिप्टोकरेन्सीको संसारमा नयाँ छु। अभिवादन।
हामीलाई एक टिप्पणी छोड्नुहोस् जवाफ रद्द गर्नुहोस्
अर्को पटक टिप्पणी गर्नको लागि मेरो नाम, इमेल, र वेबसाइट यस ब्राउजरमा बचत गर्नुहोस्।
तपाईंको व्यक्तिगत डेटा कार्डनियर्स, SL द्वारा Calle Litio, 10, Fuenlabrada, 28946, Madrid, Spain मा दर्ता गरिएको कार्यालय र hola@cardaniers.com द्वारा प्रशोधन गरिनेछ, हाम्रो प्रकाशनमा तपाईंको टिप्पणी प्रकाशित गर्नको लागि, तपाईंको डाटा तेस्रोमा स्थानान्तरण नगरी। पार्टीहरू, तपाईंले हामीलाई सम्पर्क गरेको क्षणदेखि तपाईंको डाटा हाम्रो डाटाबेसमा १ वर्षसम्म भण्डारण गरिनेछ। हामी यो प्रशोधनलाई तपाईंको सहमतिमा आधारित गर्छौं। तपाईले आफ्नो ठेगानामा पहुँच, सुधार, विरोध, मेटाउने, सीमितता र पोर्टेबिलिटीको अधिकार प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ hello@cardaniers.com। हाम्रो गोपनीयता नीति बारे थप जानकारीको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। यदि तपाईंले हाम्रो वेबसाइटमा टिप्पणी पोस्ट गर्नुभयो भने तपाईंले हाम्रो स्वीकार गर्नुहुनेछ गोपनीयता नीति।
सामान्य सम्झौता सर्तहरू
@2021 - सबै अधिकार सुरक्षित।
Cardaniers SL यस वेबसाइटको लागि जिम्मेवार छ। हामी यस वेबसाइटमा हाम्रो आफ्नै र तेस्रो-पक्ष कुकीहरू प्रयोग गर्दछौं प्रयोगकर्ता अनुभव सुधार गर्न, विश्लेषणात्मक र विज्ञापन उद्देश्यका लागि। "स्वीकार गर्नुहोस्" बटनमा क्लिक गरेर तपाइँ यसको प्रयोग स्वीकार गर्नुहुन्छ। सेटिंग्स.
सेट अप गर्नुहोस्
यस वेबसाइटले कुकीहरू प्रयोग गर्दछ ताकि हामी तपाईंलाई उत्कृष्ट सम्भव प्रयोगकर्ता अनुभव प्रदान गर्न सक्छौं। कुकी जानकारी तपाईको ब्राउजरमा भण्डार गरिएको छ र तपाईले हाम्रो वेबसाइटमा फर्किँदा तपाईलाई चिन्न वा तपाईलाई सबैभन्दा रोचक र उपयोगी वेबसाइटको कुन खण्डहरू बुझ्न हाम्रो टोलीलाई मद्दत गर्ने जस्ता कार्यहरू गर्दछ। तपाईंले हामीले प्रयोग गर्ने कुकीहरू बारे थप जानकारी पढ्न सक्नुहुन्छ यहाँ क्लिक गरेर।
कडाइका साथ आवश्यक कुकीहरू सँधै सक्रिय हुनुपर्दछ ताकि हामी तपाईंको कुकी सेटिंग्स प्राथमिकताहरू बचत गर्न सक्दछौं।
यदि तपाईंले यो कुकी असक्षम गर्नुभयो भने हामी तपाईंको प्राथमिकताहरू बचत गर्न सक्षम हुनेछैनौं। यसको मतलव तपाईले प्रत्येक पटक यो वेबसाइट भ्रमण गर्नुभयो तपाईले फेरि कुकिजलाई सक्रिय वा निस्क्रिय पार्नु पर्ने हुन्छ।
विज्ञापन कुकीहरू प्रासंगिक विज्ञापन र मार्केटिंग अभियानको साथ आगन्तुकलाई प्रदान गर्न प्रयोग गरिन्छ। यी कुकीजले वेबसाइटहरूमा भ्रमण गर्नेहरूलाई ट्र्याक गर्दछ र निजीकृत विज्ञापनहरू प्रदान गर्न जानकारी स information्कलन गर्दछ।
कृपया सख्त आवश्यक कुकीहरू पहिले सक्रिय गर्नुहोस् ताकि हामी तपाईंको प्राथमिकताहरू बचत गर्न सक्दछौं!
आगन्तुकहरूले वेबसाइटसँग कसरी अन्तरक्रिया गर्छन् भनेर बुझ्न विश्लेषणात्मक कुकीहरू प्रयोग गरिन्छ। यी कुकीहरूले मेट्रिक्स, आगन्तुकहरूको संख्या, बाउन्स दर, ट्राफिक स्रोत, आदिमा जानकारी प्रदान गर्न मद्दत गर्दछ।
सबै सक्षम गर्नुहोस्